» भारततर्फ किन जान थाले गैंडा ?
भारततर्फ किन जान थाले गैंडा ?
२०७७ माघ २२, बिहीबार १९:४८
काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आहार र बासस्थानकोको खोजीमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा भारतर्फ जान थालेका छन् । निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा केन्द्रित भएका गैंडा विस्तारै भारततर्फ जान थालेका हुन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालका अनुसार यस वर्षको वर्षातमा दुई वटा गैंडा सुस्ता हुँदै भारततर्फ गएका छन् । ती गैंडा भारतको वाल्मीकी टाइगर रिजर्बमा पुगेका छन् ।
बरालले निकुञ्जको टेम्पल, बगवन, भेलौजी हुँदै त्रिवेणीबाट भारतर्फ जाने खतरा बढेको बताए । उनका अनुसार निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा झण्डै ७० प्रतिशत गैंडा रहेका छन् । उनले भने, “पश्चिमी क्षेत्रका गैंडालाई निकुञ्जको पूर्वी भागमा स्थानान्तरण गरिएन भने भारततर्फ जाने खतरा बढेर गयो ।” नेपालमा हुर्काएर राप्ती र नारायणी नदीमा छाडिएका अधिकांश घडियाल गोही भारत जाने गर्दछन् । यसैगरी यहाँका गैंडा भारततर्फ जाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । वि.सं. २०७४ मा आएको बाढीले निकुञ्जमा ठूलो सङ्ख्यामा बगाएर गैंडा भारत पुर्‍याएको छ । उक्त समयमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर ११ वटा गैंडा उद्धार गरी ल्याइएको भए पनि पछिल्लो समय भारतले ल्याउन नदिएपछि अझै त्यहाँ गैंडा रहेका छन् ।
निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रमा गैंडाको बासस्थान राम्रो हुन नसक्दा गैंडा पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएका हुन् । निकुञ्जले विगतका वर्षदेखि नै गैंडा पश्चिमबाट पूर्वमा ल्याउने जनाउँदै आएको भए पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । बराल अब गैंडा पूर्व ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । निकुञ्जभित्रको बासस्थान थप व्यवस्थित गरेर गैंडा स्थानान्तरण नगरे क्रमशः भारततर्फ जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “आन्तरिक रुपमा निकुञ्जभित्र बासस्थानको व्यवस्थापनमा अरु बढी जुट्नुपर्ने देखिएको छ ।”
निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा एकै ठाउँमा धेरै गैंडा हुँदा खानाको अभाव हुने, एकआपसमा जुधेर मर्ने समस्या पनि देखिएको छ । पोथीसँगको प्रजननको समयमा भाले गैंडा एकआपसमा जुध्ने गर्दछन् । निकुञ्ज भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । भारततर्फ वाल्मीकी टाइगर रिजर्व छ । यहाँका पाटेबाघलगायत अन्य वन्यजन्तु पनि भारत जाने आउने गर्दछन् । दुर्लभ एक सिङ्गे गैंडा संरक्षणमा राज्य र दातृ निकायले ठूलो लगानी गरेको भए पनि भारततर्फ जाने समस्याबारे हालसम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । नेपालका निकुञ्जमा गत वर्ष गैंडा गणना गर्ने भनिए पनि कोरोना प्रभाव देखिएसँगै रोकिएको छ । यस वर्ष गैंडा गर्ने तयारी भइरहेको छ । सन् २०१५ को गणनामा नेपालमा ६४५ गैंडा रहेकोमा यहाँ ६०५ गैंडा रहेका थिए ।